हेलिकप्टर चार्टर गरेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी, गठबन्धन–एमालेलाई हराउँदै वडाध्यक्षमा विजयी- स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ - कान्तिपुर समाचार
हेलिकप्टर चार्टर गरेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी, गठबन्धन–एमालेलाई हराउँदै वडाध्यक्षमा विजयी
‘पार्टीले टिकट नदिएपछि मैले हेलिकप्टर चढेर यहाँ आउन र जानमात्रै डेढलाख बढी खर्च गरेको छु । पार्टीले नपत्याएपछि जनताले पत्याउँछन् भन्ने मेरो विश्वास थियो ।’
जेष्ठ ४, २०७९ आश गुरुङ
लमजुङ — माओवादी केन्द्रले टिकट नदिएपछि पार्टीको वडा सचिव ३२ वर्षीय श्याम गुरुङ (मीन) ले उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराउन अन्तिम समयमा हेलिकप्टर चार्टर गरेर आउनु पर्‍यो । पार्टीको केन्द्रीय तहबाटै दबाबमा परेका उनले अन्तिम समयमा हेलिकप्टरको साहरा लिनु परेको बताए ।
५ वर्ष जापान बसेर फर्केपछि समाजसेवा र राजनीतिमा सक्रिय मीनले आफ्नो गाउँ दूधपोखरी गाउँपालिका–३ को वडाध्यक्षमा दाबी गरे । वडा हुँदै पालिकाबाट सिफारिस भए पनि जिल्लाले उनलाई टिकट दिएन ।
सत्ता गठबन्धनले माओवादी केन्द्रको भागमा परेको दूधपोखरी–३ मा पार्टीले औतराम तामाङलाई टिकट दिए । एमालेले प्रितम गुरुङलाई टिकट दियो । अघिल्लो निर्वाचनमा दूधपोखरी गाउँपालिकाको ६ वटा वडामध्ये यही वडामात्रै एमाले–माओवादी चुनावी एकताबाट एमाले उम्मेदवारले जितेका थिए ।
वैशाख १२ गते उम्मेदवारी मनोनयनको दिन थियो । पार्टीले टिकट दिएमा वारेसनामाबाट उम्मेदवारी मनोनयन गराउने उनको सोचाइ थियो । ‘उम्मेदवारी आजै दिनु छ । बिहान १० बजेसम्म टिकट कसले पायो भन्ने थाहा छैन । टिकट अर्कैले पायो भनेपछि म हेलिकप्टर चढेर काठमाडौंबाट आएको हुँ,’ उनले भने, ‘चुनाव म जित्छुभन्दा भन्दै पार्टीले अरुलाई नै दियो । तर, मैले चुनाव जितेर देखाइदिएँ ।’
लमजुङको दूधपोखरी गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्षमा स्वतन्त्र विजयी श्याम गुरुङ (मीन) वडाध्यक्षमा जितेपछि बुवाआमाको बीचमा ।
आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध मनोनयन दर्ता गरेको र अन्तिम समयमा पनि नझिकेको भन्दै पार्टीले उनलाई कारबाही गरिसकेको छ । मनोनयन झिक्न अनेकन दबाब र प्रलोभन दिए पनि नमानेको उनले बताए । निर्वाचन कार्यालयले उनलाई चुनाव चिन्ह गुलाफ दियो । मनोनयन गरेर हेलिकप्टरमै फर्किएका उनी केही दिनपछि गाउँ फर्किए । चुनाव चिन्ह पाएपछि प्रचारप्रसारमा लागे ।
रोजगारीको सिलसिलामा सन् २०१४ मा जापान गएका श्याम २०१९ मा फर्किए । उनी फर्किएपछि देशमा कोरोना महामारी चल्यो । कोरोना संक्रमण जोखिमबाट गाउालेलाई बचाउन विभिन्न निकायसँग समन्वय गरी स्वास्थ्य सुरक्षा सामानलाई गाउँ पुर्‍याए । काठमाडौंमा पहिलेको दूधपोखरी समाज र पछि भएको चम्पावती समाजको उपाध्यक्षमा रहेर सेवा गरिरहेका उनले गाउँगाउँमा स्वास्थ्य सामग्री पुर्‍याए । ‘पार्टीमा कति सहयोग–असहयोग भन्दा पनि मलाई जनताले चिनेका छन् । मैले जनताको सेवा गरेको छु । चुनाव म नै जित्छु भनेर लागें । चुनाव त जितियो,’ उनले भने ।
श्रीमती मीना पाइजा पुन गुरुङ अहिले जापानमै छन् । काठमाडौंको बालुवाटारमा डेरा छ । बुवा टेकबहादुर गुरुङ र आमा गोमा गाउँमै बस्छन् । ४ दाजुभाइमध्ये उनी जेठा हुन् । ‘पार्टीले टिकट नदिएपछि मैले हेलिकप्टर चढेर यहाँ आउन र जानमात्रै डेढलाख बढी खर्च गरेको छु । पार्टीले नपत्याएपछि जनताले पत्याउँछन् भन्ने मेरो विश्वास थियो,’ उनले भने ।
आइतबार सम्पन्न मतपरिणाम अनुसार श्यामले २ सय २८ मत ल्याए । निकटतम प्रतिद्वन्द्वी माओवादी केन्द्रका औतराम तामाङले २ सय २४ ल्याए । एमालेका मानबहादुर घलेले ८१ मत ल्याए ।
प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०७९ २०:१२
लमजुङको मध्यनेपालको मेयरमा कांग्रेस, उपमेयरमा एमाले विजयी
लमजुङ — लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिकाको प्रमुखममा सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार कांग्रेसका रमेशकुमार पाण्डे निर्वाचित भएका छन् ।
एमाले उम्मेदवार राजकुमार श्रेष्ठलाई ३ सय ३७ मतले हराउँदै पाण्डे विजयी भएका हुन् । रमेशकुमारले ६ हजार ५ सय ५१ मत पाए । उनका प्रतिद्वन्द्वी एमालेका श्रेष्ठले ६ हजार २ सय १४ मत पाएको निर्वाचन अधिकृत दुर्गाप्रसाद भुर्तेलले बताए ।
उपप्रमुखमा एमालेकी सीता गुरुङले सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार माओवादी केन्द्रका उपेन्द्र अधिकारीलाई १ हजार ३ सय ४२ मत अन्तरले हराउँदै विजयी भएकी छन् । सीताले ६ हजार ४ सय १६ मत प्राप्त गरिन् । उपेन्द्रले ५ हजार ७४ मत पाए ।
प्रमुखका दाबेदार राप्रपाका प्रतापशाली घिमिरेले २ सय ५१, स्वतन्त्रका प्रभुराज घिमिरेले २१ र मंगोल नेश्नल अर्गनाइजेशनका महेन्द्र गुरुङले १९ मत पाएका छन् । उपप्रमुखका प्रत्यासी राप्रपाका शोभा रानागरमले ४ सय ४७, स्वतन्त्रका नारायणबहादुर कुँवरले ८५ र जसपाका गेहराज पौडेलले १ मत पाएका छन् ।
वडाअध्यक्षका कांग्रेस उम्मेदवारहरु वडा नं. २ मा पदमबहादुर थापा, ३ मा केशव न्यौपाने, ४ मा रामबहादुर श्रेष्ठ, ५ मा ओमवीर गुरुङ, ७ मा हिरा गुरुङ, ९ मा महेशकुमार पाण्डे र १० मा रामचन्द्र भण्डारी गरी ७ जना निर्वाचित भएका छन् । एमालेतर्फ वडा नं. १ मा सुदीप थापा, ६ मा विष्णुभक्त पौडेल र ८ मा चन्द्रप्रसाद गुरुङ एमालेबाट वडाअध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् ।
प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०७९ १६:२७